Khabar Break - पत्रकार अधिकारीलाई ५ प्रश्न
Thursday 19th of October 2017, 5:48:10 am
अन्र्तरवार्ता Published On: Wednesday 30th of November 2016, 10:22 AM
हेटौँडा, १५ मंसिर
पर्साको प्रतीक दैनिकबाट पत्रकारिताको क्यारियर सुरु गरेका गिरिजा अधिकारीले बिभिन्न एफएमको समाचार प्रमुख, स्टेशन म्यानेजर, थाहा सन्देश दैनिक तथा प्रदेश दैनिकको सम्पादक, साम साप्ताहिकको प्रकाशक सम्पादक, नयाँ पत्रिका दैनिकको उपसम्पादक तथा सौर्य दैनिकको बरिष्ठ उपसम्पादक, हेटौंडाको लोकप्रिय टेलिभिजन टिम टेलिभिजनको डेक्स सम्पादकको समेत जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । हाल नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष रहेका अधिकारी पछिल्लो समय सूचनाको हकको प्रयोगका कारण चर्चामा छन् । मकवानपुरको ढु्गा गिटी वालु्वाको उत्खनन र संकलनका सन्दर्भमा सूचना मागे पनि हालसम्म ती सूचनाहरु प्राप्त भएका छैनन । राष्टिय सूचना आयोगले जिविस मकवानपुुरलाई अधिकारीले मागेका सूचना दिन आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशको विरुद्ध जिविसका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मण विक्रम थापा सर्वोच्च अदालत पुुगेका छन् । यिनै विषय र मकवानपुरको पत्रकारिताका सेरोफेरोमा आधारित रहि अधिकारीसँग गरिएको पाँच सवाल जवाफ ।
१. तपाइले लामो समय अघि देखी जिविस मकवानपुरसँग माग गरेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउनुभएको छैन, अब के हुन्छ त ?
– मैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नेपालको संविधान बमोजिम सार्वजनिक चासोको विषयमा जिविससँग सूचनाहरु मागेको हु्ँ । ती सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुुपर्ने दायित्व जिविसको हो । तर, अनेक बाहना बनाएर सूचना नदिने तर्फ तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी लाग्नुु भयो । यहाँ सम्म कि राष्टिय सूचना आयोगको आदेश समेत मान्नुभएन र सर्वोच्च अदालत जानू भो । खासमा रिटमा स्थानीय विकास अधिकारीले अन्तरिम आदेश समेत माग्नु भएको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मैले सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउनुपर्ने हो । हेपाहा प्रवृत्तिको कारण सूचना पाउन सकिएन । अब आउँदो २१ गते सर्वोच्चमा पेशी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन ।
२. मकवानपुरमा सार्वजनिक निकाय बाट सहजरुपमै पाउनुपर्ने सूचना पाउन निकै कठिन देखियको छ । यसको समाधानको उपाय के होला त ?
– सामान्य विज्ञापन गर्ने किसिमका बाहेक अन्य सूचना पाउन मकवानपुरमा निकै कठिन छ । सूचना पाउन का लागि स्थानीय सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सबै तह र तप्का क्रियाशील हुनुपर्छ । मैले मागेको सूचना वा तपाइले मागेको सूचनाले मकवानपुरकै पारदर्शीतामा योगदान पुर्याउने हो । मकवानपुर जिल्लाका सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने हो । मकवानपुरका सबै दल, संघसस्था अधिकारकर्मीको दबाब आवश्यक छ । जसले विस्तारै यस्ता समस्याको समाधान गर्न सक्छ । साथै हरेक नागरिकले महिनाको एक पटक एउटा निकायमा सूचना माग्ने सस्कृति बसाल्न सकियो भने पनि यो अभियानलाई बल प’छ ।
३. प्रसंग बदलौ, तपाइ पत्रकार महासघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । मकवानपुरका पत्रकारहरु महासघ संग त्यति सन्तुष्ठ देखिदैनन् नि ? पत्रकार तथा संचारमाद्यमको हितमा महासंघ के के गरिरहेको छ त ?
– पत्रकारहरुका तमाम आसा पत्रकार महासंघसँग हुनु स्वभाविक हो । तर, हामी न्यून साधान स्रोतमा काम गरिरहेका छौं । थोरै स्रोतलाई सबैको हीतमा प्रयोगमा ल्याउँदा सबै पत्रकार समान हिसाबले सन्तुष्ठ हुन नसक्नु स्वभाविक हो । भोलिका दिनमा पत्रकारहरुको थप असन्तुष्ठीका बारेमा महासंघले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु । पत्रकार महासघ मकवानपुर हरेक पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र क्षमता विकासको काममा क्रियाशील छ । हाम्रो कार्यसमितिले पत्रकारहरुको क्षमता विकासका लागि धेरै तालिमहरु गर्यो । विविध विषयमा तालिमको माद्यमबाट पत्रकारहरुलाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । महासंघको भौतीक विकासका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला स्तरीय सूचना केन्द्र निर्माण गरेका छौँ । त्यसको केही दिनभित्र उद्घाटनसमेत गर्दैछौँ । हामीले बार्षिक साधारणसभामा अग्रजहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको पनि विकास गरेका छौँ । यो बीचमा नाकाबन्दी, भुकम्पजस्ता आपतहरु पनि महासघले झेलेको छ । त्यतिबेला पत्रकारलाई राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरु महासंघले गर्यो । अहिले पछिल्लो पटक महासंघले आफ्ना सदस्यहरुको दूर्घटना बिमासमेत गरेका छौँ । संचार माद्यम बलियो हुनुपर्छ भनेर महासंघले काम गरिरहेको छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हामी लागेका छौँ । संगसंगै संचारमाद्यमले समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले जोड दिँदै आएको छ । मकवानपुरका संघसस्था तथा सरकारी कार्यालय तथा मकवानपुरका उद्योगहरुलाई महासंघले आग्रह गरेको छ कि संचारमाद्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइयोस् ।
४. पत्रकारहरुको भूमिकालाई चाहिँ कसरी मूल्याकंन गनुुभएको छ ?
– मकवानपुरका पत्रकारहरु अन्य जिल्लाभन्दा यहाँ निकै क्रियाशील छन् । थुप्रै जनचासोका विषयमाथि मकवानपुरे पत्रकारहरुले कलम चलाइरहेका छन् । धेरै महत्वपूर्ण विषयको खोजमा लागेका छन् । मकवानपुरे जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने तमाम बिषयमा कमल चलाइरहेका छन् । एक किसिमले भन्दा खोजी पत्रकारितामा मकवानपुर बलियो साबित हुँदैछ । केही पत्रकारहरुले निकै राम्रो प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यो अझै प्रयाप्त चाहिँ होइन । अझै केही गर्न सकिन्छ । मकवानपुरका पत्रकारहरुले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा जोड दिन आवश्यक छ । साथसाथै एकतावद्ध तरिकाले अघि बढ्न जरुरी छ । अनिमात्र हामी केही गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ ।
५. अन्त्यमा केही भन्नै पर्ने कुरा छुटेको छ ? छ भने भन्नुहोस् ।
–सूचनाको हकको अभियानलाई अझ अगाढि बढाउन क्रियाशील हुुन अपिल गर्दछु । साथै पत्रकार महासंघलाई अझ बलियो बनाउन सबैको भूमिकाको अपेक्षा रोखेको छु । यसका लागि मकवानपुुरका संचारमाद्यम र पत्रकार महासंघलाई प्रतिष्ठित बनाउन सकियो भने मात्र मकवानपुरे पत्रकारको प्रतिष्ठा बढ्छ । संचारमाद्यम बलियो भ ए भनेमात्र पत्रकारहरु बलियो हुन्छन् । तपाइको लोकप्रीय अनलाइन मार्फत् सबै अग्रज पत्रकार तथा समकालिन मित्रहरुलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गर्न चाहन्छु ।